entana moto Factory - vokatra vita amin'ny motera China Manamboatra, mpamatsy
Amin'ny maha mpanamboatra traktera efa zotram-pandeha an-tsofina any Shina, izahay ao amin'ny YTO dia afaka manamboatra traktera misy kodiarana marobe, miaraka amin'ny herinaratra manomboka amin'ny 18 ka hatramin'ny 500HP ， Araka ny fomba fiarany, ny traktera misy kodiarana dia azo atokana ho an'ny traktera 2WD sy traktera 4WD. Amin'ny alàlan'ny motera ampiasainy, ny traktera misy kodiarana dia tafiditra ao amina traktera 2 cylinder, traktera 3 cylinder, traktera 4 sy cylinder tractor. Araka ny fampiharana manokana azy, ny traktera dia azo zaraina ho an'ny traktera azo ...
YTO POWER dia mamatsy kitapo maivana sy rano fitoeran-tsofina napetraka ho an'ny cusomers miaraka amin'ny milina famokarana ho an'ny tenantsika, ny fantson-kitay sy ny rano azonay dia mahafeno ny fenitra Aostralianina, Moyen Orient sy Eropa, azontsika atao ny manamboatra ilay paompy mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa manokana. Ny paompy diesel misy antsika dia mety amin'ny famatsian-drano indostrialy sy ny tanàna, ny rano fantson-drano, ary ampiasaina betsaka amin'ny famatsian-drano ny fambolena, fitaterana rano madio na rano hafa izay toetra voajanahary sy simika dia mitovy amin'ny rano madio. F ...
Fivoriana sy fitsapana: andalana fivoriambe kilasy 2.Atlas Copco Fitaovana sy rafitra fivoriambe. 3.AVL diesel maotera rafitra fanodinana ny rafitra 4.Diesel maotera fizahan-tany 5.Nizarina fitiliana sy foibe foibe 6.Nature fehezin-tsolika fizahana YTO POWER manolotra YANGDONG sy YTO andian-dahatsoratra mpanamboatra maotera avo lenta, herinaratra mihetsika ho 10kva hatramin'ny 500kva, miaraka amin'ny karazana misokatra sy mangina, 50HZ ary 60HZ. Ny tombony sy ny endri-javatra 1.ny solosaina novokarina mba hahazoana antoka amin'ny kalitao azo itokisana, Sarobidy lehibe ho an'ny ...